Xog aynu hore uga qornay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo rumoowday (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xog aynu hore uga qornay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo rumoowday (AKHRISO)
Guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa ugu dambeyn ka mid noqday golaha wasiirada cusub ee uu maalintii shalay ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Yuusuf Dabageed ayaa dhamaadkii sanadkii hore waxaa xil ka qaadis ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble, isagoo waqtigaasi ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Xil ka qaadista Yuusuf Dabageed ayaa xilligaasi waxaa ka dhashay shaki badan, waxaynu islamarkiiba helnay xog sheegaysa uljeedada rasmiga ah ee ka dambeysay arrinkaas.
Warbaahinta Bulshoweyn ayaa noqotay warbaahinta kaliya oo soo gudbisay in xil ka qaadista lagu sameeyay Yuusuf Dabageed looga dan-lahaa in lagu soo darro golaha wasiirada cusub ee loo soo dhisi doonno maamulka Hirshabeele.
Yuusuf Dabageed oo xilligaasi la socday sababta xilka looga qaaday ayaa sheegay inuu soo dhaweeynaayo xil ka qaadista lagu sameeyay balse lagu deg-degay, taas oo sii kordhisay shakiga aynu ka qabnay waxa uu madaxweyne Cosoble damacsanaa. HALKAAN KA AQRISO XOGTA AYNU HORE U QORNAY
Madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa Yuusuf Dabageed maalintii shalay ku daray liiska golaha wasiirada cusub uu maamulkaasi yeelanayo, waxaana loo magacaabay wasiirka dib u heshiisiinta iyo is-dhexgalka bulshada.